कर्णाली प्रदेशको चियापानमा स्पेसल मार्सी चामलको खिर !::Hamrodamak.com
कर्णाली प्रदेशको चियापानमा स्पेसल मार्सी चामलको खिर !
जुम्ला , १७ कार्तिक । कर्णाली प्रदेश सरकारले शुक्रवार बेलुका शुभकामना तथा चियापान कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो ।
कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा विभिन्न चाडपर्वको अवसरमा आयोजना गरिएको चियापान कार्यक्रमलाई मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले अनौपचारिक सम्बोधन गर्दै यसले भावनात्मक सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने बताएका छन् ।
बेलाबखतमा गरिने भेटघाट र यस्ता चियापान कार्यक्रले सम्पूर्ण नागरिकसँगको भावनात्मक सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउन सघाउने साहिले बताए ।
कार्यक्रममा सामान्य खाजाको व्यवस्था गरेको र खानका लागि भन्दा पनि सबैको भावनात्मक सम्बन्ध जोड्नको लागि कार्यक्रम आयोजना गरेको साहिले बताएका छन् । समय समयमा हुने यस्ता चियापान कार्यक्रमले सम्बन्धलाई बलियो बनाउने उहाँको धारणा रहेको छ ।
सम्पूर्ण प्रदेशवासीले साथ सहयोग गरेमात्र समृद्धि र बिकास छिट्टै हुने साहिले कार्यक्रमा बताए। प्रदेशको भौगोलिक विकटता र अप्ठ्यारा भए पनि प्रदेशको विकासमा सरकारले कुनै कमी नगर्ने उनले दावी गरे ।
त्यस्तै कार्यक्रमा सहभागी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले अहिले प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि सबै एक भएको बताएका छन् । विभिन्न पार्टीबाट निर्वाचित भएर आए पनि प्रदेश सरकारमा सबै एउटै भूमिकामा रहेको बताए ।
चियापान कार्यक्रममा सहभागीलाई कर्णाली प्रदेशमा उत्पादित तथा पछिल्लो समयमा निकै चर्चा पाएको मार्सी चामलको खिर खुवाइएको थियो । मार्सी चामलको आफ्नो छुट्टै पहिचान रहेको छ ।
मुख्यमन्त्री शाहीले आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा मार्सी चामलको खिरले सबैको ध्यान तानेको थियो । चियापान कार्यक्रमा खानाका परिकारहरुमा मार्सी चामलको खिर, पुरी, रोटी, तरकारी, अचारको व्यवस्था रहेको थियो ।
कार्यक्रममा पाँच सय भन्दा बढीलाई निम्ता गरिएको थियो । निम्तालाई स्वीकार्दै प्रतिनिधिसभाका सदस्य, प्रदेश सरकारका पदाधिकारी, प्रदेश सांसद, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, विभिन्न राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, विभिन्न संघसंस्थाका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरु लगाएतले कार्यक्रमा सहभागिता जनाएका थिए ।